Herisetra ara-nofo Mpianatra 11 taona naolan’ny tovolahy iray
Zazavavy avy nianatra naolana tovolahy iray raha norebirebeny nanakalo vola ireo roa vavy namany.
Tao Antamboho, fokontany Antoby, Betsinjaka, ao Toliara faharoa, ny alakamisy 2 aogositra lasa teo tokony ho tamin’ny 03 ora tolakandro no nisehoan’ny asa ratsy. Tovolahy iray no fantatra fa nanolana zazavavy kely 11 taona avy nianatra. Araka ny fanadihadiana natao dia telovavy izy ireo no niaraka ka nifanena tamina tovolahy iray teo an-tanàna ihany. Nirahin’ity tovolahy ity nanakalo vola ireto zazavavy ireto ka nambarany fa ny roa amin’ireo zazavavy ihany no manakalo vola fa ny iray kosa miara-mijanona aminy.
Rehefa nijanona niaraka taminy ilay zazavavy kely 11 taona dia nentiny naka toerana mangingina ka nalavony tamin’ny tany ary natsofony tany amin’ny fivavian’ilay zazavavy ny tanany. Rehefa vita moa ny nataony dia nalefany nandeha ilay zazavavy. Nony tonga tany an-trano ilay zazavavy kely dia nitantara ny nahazo azy ary tsy nisalasala ny ray aman-dreniny niantso ny polisy sy napandre ny fokonolona ny tranga nahazo ny zanany. Ny zoma 3 aogositra no voasambotra ilay tovolahy ka rehefa natao ny famotorana azy dia niaiky ny heloka nataony izy. Efa natolotra ny fitsarana any an-toerana ny raharaha.